Gmail: Sidee looga soo ceshan karaa xiriirada tirtiray barnaamijka | Androidsis
Sidee looga soo kabanayaa xiriirada lumay ee Gmail
Gmail waa codsi aan maalin walba ugu isticmaalno taleefankeena Android. Hab wanaagsan oo lagula xiriiro asxaabta, qoyska ama loogu isticmaalo sababo shaqo awgood. Sidaa darteed dalabku wuxuu na siinayaa hawlo badan oo xiiso leh, sida jadwalka emaylka. Marka waxaan farriin ugu diri karnaa dadka aan hayno xiriiro ahaan barnaamijka laftiisa.
Nasiib darrose, way dhici kartaa inaan si khalad ah u tirtirno hal ama in ka badan oo xiriir ah oo ku jira Gmail. Markay tani dhacdo, waxaan jeclaan lahayn inaan tan dib u helno si aan ula xiriirno qofkaas. Codsiga wuxuu na siiyaa hab aan ku soo ceshano xiriirada la tirtiray. Waxaan kuu sheegeynaa sida ay u shaqeyso xagga hoose.
1 Waqtiga xaddidan
2 Soo Celinta Xiriirada la tirtiray ee Gmail on Android
Tani waa faahfaahin aan ku qasban nahay inaan tixgelinno waqti kasta. Sida dhacday markaynu rabno inay soo ceshano feylalkii aan ku tirtirnay taleefanka, Gmail waxaan sidoo kale haysanaa waqti xadidan oo aan ku soo ceshan karno xiriiradaan aan ku khaldnay ajandaheena. Xaalada arjiga boostada, waxaan haysanaa wadar ahaan 30 maalmood ilaa laga saarayo xaqiiqo ah waxaa ka mid ah.
Sidaa darteed, haddii aan ogaanay inay naga maqan tahay xiriir, waxaan heysanaa ilaa 30 maalmood oo aan ku soo kabsano. Haddii waqtigan horay loo soo dhaafay, suurtagal ma ahan in lagu soo celiyo codsigooda. Taas oo macnaheedu yahay inay tahay inaan dib ugu soo galno xiriirkan ajandaheena gacanta. Maaha musiibo, laakiin haddii aan dhammaantood si khalad ah u wada tirtirnay, markaa dhibaatadu waa mid la ogaan karo oo xanaaq badan. Laakiin marka hore waa inaan tijaabino xalka arjiga uu noo diyaariyo.
Soo Celinta Xiriirada la tirtiray ee Gmail on Android
Gmail wuxuu noo ogolaanayaa inaan soo ceshano xiriiro la tirtiray labadaba kombuyuutarka iyo Android. Xaaladdan oo kale waxaan ku tusaynaa tillaabooyinka ay tahay inaan raacno taleefannadeenna Android, si aan awood ugu yeelano inaan xiriirradaan ugu laabo barnaamijka. Tallaabooyinku waxay la mid yihiin kuwa kumbuyuutarka, laakiin leh interface ka duwan mar walba.
Waa inaan ka furno Gmail marka hore taleefankeena Android. Marka xigta, waxaan fureynaa menu-ka dhinaca arjiga, halkaas oo aan ka helno xulashooyin taxane ah. Mid ka mid ah qaybaha aan helno ayaa ah kuwa lala xiriiro, calaamadda ay tahay inaan ku riixno kiiskan. Tani waxay noo keeneysaa qaybtaas, halkaas oo aan markaa ku khasban nahay inaan gujino astaanta qaabeynta. Marka sidaas la sameeyo, waxaa naloo qaadayaa daaqad cusub, halkaas oo ay tahay inaan ku siibanno illaa aan ka gaarno xulashada loo yaqaan Maareynta xiriirada.
Kadib waxaan galeynaa qeyb cusub, halkaas oo aan ku tagi karno ikhtiyaariyada Isbedelada Isbedelada. Markaad riixayso xulashadan, xaaladaha qaarkood waa inaan dhowr jeer riixnaa, waxaan heli doonaa fursado dhowr ah. Soo celi xiriirada qabyada ah inta udhaxeysa 10 daqiiqo, 1 saac, shalay, 1 todobaad ama caado. Waxay kuxirantahay waqtiga laga soo gudbay, waa inaad doorataa ikhtiyaar ku habboon Gmail. Hadday tahay wax aad shan daqiiqo ka hor si khalad ah u sameysay, 10 daqiiqo ama 1 saac ayaa kugu filan. Haddii aan isticmaalno xulashada caadada ah, waxaan ku soo ceshan karnaa xiriirada illaa 30 maalmood oo wakhtiga la soo dhaafay ah, sidii aan horayba kuugu soo sheegnay.
Marka ikhtiyaarka la doorto, Gmail wuxuu sii wadi doonaa inuu ka soo kabsado xiriiradaan tirtiray barnaamijka. Waxa caadiga ahi waa in hawshu dhammaato, laakiin waxay qaadan kartaa in muddo ah in isbeddelada noocaas ah lagu arko shaashadda. Sidaa darteed, haddii aad aragto inaad waxan sameysay, isla markiiba mahelaysid xiriiriyadan, ha ka welwelin. Waxay qaadan kartaa muddo, badiyaa dhowr daqiiqadood, in codsigan isbeddelku dhaqan galo.
Qaabkan, waxaan horeyba uga soo ceshanay xiriirada Gmail qaab runti fudud. In kasta oo xulashadani ay leedahay xaddidnaanteeda, haddii ay dhacdo in ka badan 30 maalmood ay dhaaftay maadaama aan qof ama dhowr qof ka tirtirno xiriirada. Laakiin had iyo jeer waa lagugula talinayaa inaad isku daydo ikhtiyaarkan, si aad u aragto haddii ay shaqeyneyso oo naga caawineysa inaan ka soo kabanno xiriiriyadan. Weligaa ma isticmaashay habkan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sidee looga soo kabanayaa xiriirada lumay ee Gmail
Google ayaa mas'uul ka noqon doonta hawlgelinta RCS
Taxanaha Samsung ee Galaxy Note 7 ayaa la soo saari lahaa bisha Ogosto 10